ကဗ်ာတပုဒ္​လို — Steemkr
" အဘယ်အရာကိုသင်သည်သင်၏ခရီးသွားမှတ်တမ်းအများစုအံ့အားသင့်ခဲ့သလဲ တခါတရံမှာငါသည်သင်တို့ကိုတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်နေကြတယ်သောအခါ, ကဗျာကို၌သငျထဖမ်းမိကြောင်းစွမ်းအင်တစ်ခုသဘောမျိုး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးဝိညာဉျကိုရှိမယ့်ကြိုက်နှစ်သက်ခံစားကြရသည်။
သင်တို့သည်ဤမျှဝေးကဗျာဆရာဆုရှင်အဖြစ်လုပ်ဖို့ကိုဆည်းပူးင့်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအရာကဘာလဲ? ငါသည်ငါ့ခမည်းတော်သည်လေတပ်အတွက်ကြောင့်အထူးဖြစ်ခဲ့သည်ဒါကခလိုဗစ်၏, N.M. အနီး Cannon လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းသွားရောက်ခဲ့သည်။
ကဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ထက်အခြားအရာတစ်ခုခုမှနှိမ့်ချခြင်းနှင့် ရှိ. ကျေးဇူးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကအရေးကြီးပါတယ်။ အလွန်အကျွံကျွန်တော်တို့ရဲ့ကနဦးအူတုံ့ပြန်မှုမယုံနိုင်လောက်အောင်တန်ဖိုးရှိသောနှင့်အားနည်းချက်, မများနှင့်စားသုံးသူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကိုတခြားရုံအကြောင်းကိုဘာမှထက်ပိုအရေးကြီးတယ်ဖြစ်ကြောင်းကြောင်း, ငါတို့အရေးအပါဆုံးအရာပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ 21 ရာစုဘဝအသက်တာ၌ရှိပါတယ်။
တစ်ဦးကကဗျာကိုဘယ်သူမျှမ "လို့ပြောပါတယ်။ သငျသညျခံစားချက်တွေကိုရှိသည်။ သငျသညျစိုးရိမ်မှုတွေရှိသည်။ သငျသညျမေးခွန်းများကိုရှိသည်။ ရဲ့စကားသံကိုနှင့်လူ့ဖြစ်ခြင်း၏ဝေါဟာရမှပြန်ရစေ။ " သငျသညျကဗျာဆရာဆုရှင်အဖြစ်သင့်တာဝန်သည်အဘယ်သို့ခံစားရသလဲ ငါသည်ငါ့တာဝန်ဒါဟာလူတိုင်းအတွက်လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရှိပြီးအရာတစ်ခုခုသည်ဟုပြောရန်ဖြစ်ပါသည်ထင်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကဗျာကိုသင်နားမလည်တစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒီဂရီလိုအပ်ပါတယ်တစ်ခုခုမဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်လည်းကြင်နာ၏ဤအထူးသဖြင့်ဝေါဟာရကလူအသုံးအနှုန်းများတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အစုအားဖြင့်နေထိုင်နေကြရတဲ့အရပျ၌ဆင်းသက်ပုံကိုကြည့်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြည်သူ့အတွက်ငုပ်ပြီး "ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏ငါ့ကိုသတိပေး" သို့မဟုတ်, ပြောဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည် "ဒီကဗျာတစ်ပုဒ်ငါရေခြားမြေခြားခဲ့သောအခါငါကြုံတွေ့တစ်ခုခုငါ့ကိုသတိပေးနေပါတယ်။
ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Santa Fe အိန္ဒိယ School မှာကျောင်းသားအုပ်စုတစုနှင့်အတူစကားပြောခဲ့ သူတို့ကျနော်တို့ကသာကဗျာမဟုတျကွောငျးဘာသာစကားနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ယုံကြည် "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့။ ကြောင်းဆုတောင်းပဌနာအခမ်းအနားနှင့်အတူဖြစ်ပျက်ယုံကြည် "ဒါငါ Wow, ဒီ, ငါသည်အသက်ရှင်သောသတ္တဝါအစဉ်အလာ-အခမ်းအနားအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုစဉ်းစားဘို့အခြားဝေါဟာရဖြစ်ပါသည်, စဉ်းစားမိတယ်။
အဘယ်သူ၏သက်တမ်းသင်တစ်ဦးမော်ဒယ်လ်အဖြစ်သုံးစွဲဖို့လိုခငျြတဲ့အထူးသဖြင့်ကဗျာဆရာဆုရှင်ရှိခဲ့ကြပြီလော Rita ချိုးငှက်ဝါရှင်တန်, D.C. အတွက်အများပြည်သူဖတ်တွေအများကြီး ပေး. , အတွင်းကျယ်ပြန့်အများပြည်သူဆောင်ခဲ့။ , ငါစိတ်ကူးကိုချစ်၏။ ငါသည်လည်းရောဘတ် Pinsky ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကဗျာစီမံကိန်းကိုချစ်၏။ "ငါသည်ကဗျာအကြောင်းအများကြီးမသိရပါဘူးအိုး," ဟုပြောသူကိုလူတွေတောင်မှသူတို့သယ်တဲ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ပါဘူး။ သငျသညျသယ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကဗျာကိုရှိပါသလား? သူတို့ကိုငါအများကြီးရှိသည်။
ကျွန်မကလေးတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောအခါအကြှနျုပျအားပွောဆိုသည့်အမ်မလီ Dickinson ကဗျာတစ်ပုဒ်အကြောင်းကိုစာဖြင့်ရေးသားပါတယ်: "ငါဘယ်သူမှပေါ့! သင်သည်အဘယ်သူနည်း / နငျသညျ-ဘယ်သူမှ-လည်း? မတ်ေတာသညျ (III ကို) "ငါမှတ်မိပထမဦးဆုံးကဗျာတစ်ပုဒ်ဂျော့ချ်ဟားဘတ်ရဲ့ခဲ့ပါတယ်" ။ "ဒါဟာထိုက်တန် feeling နှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဟုအကြောင်းကဗျာတစ်ပုဒ်ရဲ့အဘယ်သူမျှမမျှ, သင်တို့ကိုငါအစေခံပါလိမ့်မယ်။ အသစ်ရဲ့စာအုပ်, ရေအတွက် Wade အတွက်ကဗျာအချို့ကိုပြည်တွင်းစစ်ကြီးအကြောင်းကိုဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ယခုအကြောင်းရေးဖို့? ကျနော်တို့ပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေ, ကြှနျုပျတို့သညျအမှနျတကယျလကျခံဖို့အတွက်စေ့စပ်ခံရဖို့ပုံရသည်သောရုန်းကန်လျက်နှင့်မယ့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသည်းခံပေမယ့်တန်ဖိုးကိုထင်, လမ်းခရီးတရှောက်လုံးကိုပြန်သောအခြိနျကာလကိုသွားကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ အဘယ်ကြောင့်နိုင်ငံရေးတုံ့ပြန်ကြောင်းကဗျာရေးဖို့? ငါလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်, သင်၏မာနထောင်လွှားနေတဲ့အမြင်, သငျသညျရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများနှင့်အတူညစာပါတီမှာထွက် trot မယ်လို့အရာမျိုးရှိသည်ဖို့လုံလောကျရဲ့သည်ဟုမထင်ကြဘူး။ ကျနော်တို့သူအပေါငျးတို့အမှုအရာများကိုသိပေမယ့်ကိုယ့်ကျွန်တော်တို့ထက်ကျော်လွန်ရဖို့ကိုယျ့ကိုယျကိုဖိအားပေးဖို့ရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးလွယ်ကူပါတယ်, တဦးတည်းတဖက်သတ်အဖြေကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရင့်သောကြောင့်, အနုပညာ, ထိုအကျင့်ကိုကျင့်၏ကောင်းတစ်ဦးလမ်းဖြစ်၏ ဒါဟာဆိုးကျိုးများတဲ့ဝိရောဓိထွက်ရှာတတ်၏။ သင်တို့အဘို့အလာမယ့်ကဘာလဲ? ငါရီလဲ့လို့ချေါတဲ့ခေတ်ပြိုင်တရုတ်ကဗျာဆရာ Co-ဘာသာပြန်ဆိုတာပါ။ ငါမြေပေါ်တွင်ကျွန်ခံရကြ၏သူတွေကို၏သားစဉ်မြေးဆက်နေဖြင့်ကျင်းပမြေယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့, Greg Spears နဲ့အော်ပရာတစ်ခု libretto အလုပ်လုပ်တယ်, ထိုပြည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောဖြစ်လာသည့်အခါအဘယ်အရာကိုတွေ့ကြုံတတ်၏။
kabyaar kyawantawthoetrae kopine aamyin htaat aahkyarrarar taithkuhku mha nhai m hkya hkyinnnhaint shi. kyaayyjuu hpyithphoet kyawantawthoet ko loaautpartaal . dark aarayykyeepartaal . aalwanaakyawan kyawantawthoetrae k n u auu tonepyanmhu mayone nine loutaaung taanhpoeshisaw nhaint aarrnaeehkyet, m myarr nhaint hcarrsonesuu aahpyit kyawantawthoetrae htainmyin yuusahkyet kyawantawthoet ko aakyaunggko tahkyarr rone aakyaunggko bharmha htaat po aarayykyeetaal hpyitkyaungg kyaungg, ngarthoet aarayyapar sonearar parpell kyawantawthoet ko pyawwpya kyaunggkyawantawthoetrae 21 rarhcu bhaw aasaat tar shipartaal . tait u k kabyaarko bhaalsuu myaham " lhoetpyawwpartaal . s ngya s nyya hkanhcarrhkyettwayko shisai . s ngya s nyya hcoerainmhutway shisai . s ngya s nyya mayyhkwannmyarrko shisai . rae hcakarrsan ko nhaint lhu hpyithkyinn eat wawharr mha pyan r hcay . " s ngya s nyya kabyaarsarar sushin aahpyit sang tarwaan saiabhaalshoet hkanhcarrrasalell ngarsai ngar tarwaan darhar luutineaatwat lotehphoet hkwin pyuhkyet shipyeearar taithkuhku saihu pyawwraan hpyitparsai htainpartaal . tait u k kabyaarko sain narrmalai taithku aasaint myint degare loaautpartaal taithkuhku mahotepar . sainthoetsai imyaha wayy kabyaarsarar sushin aahpyit lotehphoet ko saee puu int hcatewainhcarrhcarar aakaunggsonearar k bharlell? ngarsai ngar hkamaeetaw sai laytaut aatwat kyawwng aahtuu hpyithkaesai dark hk lo bait eat, N.M. aanee Cannon laytaut aahkyayhcite hcahkaann swarrrouthkaesai . darpaymaae laee kyinnar eat i aahtuu s hpyint wawharr k luu aasoneaanhuannmyarr tae nayrarmhar matuunyetaeahcu aarr hpyint nayhtine naykya rataear pya sainnsaat pone ko kyany hphoet hcatelhuutsharr hcarar hpyithkaesai . pyishuaatwat ngotepyee " de kabyaartaitpud saalkyawsaat tait u hpyithkyinn eat ngarko satipayy" shoetmahote, pyaww sandashihkaekyasai " de kabyaartaitpud ngar ray hkyarr myay hkyarr hkae sawaahkar ngar kyuantwae taithkuhku ngarko satipayy naypartaal . "abhaalaarar ko sainsai saineat hkareeswarrmhaattam aamyarrhcu aanaarr saint hkaesalell tahkartaranmhar ngarsai sainthoet ko taithcone tait u nhaint aatuu tait kabyaartaitpud ko narrhtaung naykyataal sawaahkar, kabyaarko s ngya ht hpammi kyaungg hcwmaain taithku sabhawmyoe, darmhamahote tait u wi nyar nyya ko shi m ae kyaite nhaitsaat hkanhcarr kya rasai . ngar naepaatsaattae Santa Fe aindiy School mhar kyaunggsarr aotehcu t hcu nhaint aatuu hcakarrpyawwhkae suuthoet kyanawthoet k sar kabyaar m hu tya kwayarngya bharsarhcakarr nhaint aatuu hpyitpyetyonekyi " hupyawwsai . kyanawthoet . kyaungg sutaungg p ht nar aahkamaanarr nhaint aatuu hpyitpyetyonekyi " darngar Wow, de, ngarsai aasaatshin saw sattawarahcainalar- aahkamaanarrabhaalshoet pyumai aararko hcain hcarr bhhoet aahkyarr wawharr hpyitparsai, hcain hcarr mitaal .abhaal suueat saattam sain tait u mawdaall aahpyit sonehcwal hphoet lo hk ngyaya tae aahtuu s hpyint kabyaarsarar sushin shihkae kya pyelaw Rita hkyoe nghaat warshintaan, D.C. aatwat aamyarrpyisuu hpaattwayaamyarrkyee payy. , aatwin kyaal pya ant aamyarrpyisuu saunghkae . , ngar hcatekuu kohkyit eat . ngar sailaeerawbhaat Pinsky rae aakyaitesonekabyaar hcemankein kohkyit eat . " ngarsai kabyaar aakyaungg aamyarrkyee m sir parbhuu aoe," hu pyaww suu ko luutway taungmha suuthoet saal tae kabyaartaitpud shitaal parbhuu . s ngya s nyya saal tait u aahtuu s hpyint kabyaarko shiparsalarr? suuthoetko ngar aamyarrkyee shisai . kyawanm kalayy tait u hpyithkaesai sawaahkarakyahanyaupya aarr pwayar so saeet aam male Dickinson kabyaartaitpud aakyaunggko hcar hpyint rayysarr partaal: " ngar bhaalsuumha pot! sainsaiabhaalsuunaee / n ngya s nyya- bhaalsuumha- laee? maat aytar sanyya (III ko) " ngar mhaatmi pahtam u sone kabyaartaitpud gyawwhkya harr bhaat rae hkaepartaal" . " darhar htitetaan feeling nhaint hkyithkyinnmayttar saihu aakyaungg kabyaartaitpud raeabhaalsuu myaha m myaha, sainthoet ko ngarahcay hkan par lain maal . aasait rae hcaraote, rayaatwat Wade aatwat kabyaar aahkyahoetko pyitwinhcaitkyee aakyaunggko hpyitkyasai .abhaal kyount yahku aakyaungg rayyhphoet? kyanawthoet pyainepwal nae paatsaattae mayyhkwanntway, kyahanyaupyathoet s nyya aamhanyatakayya l kya hkan hphoetaatwat hcaehcaut hkanr hphoet pone rasai saw ronekaan lyet nhang m ae tait u hkyinn hce k tahkyarr saeehkan paymaae taanhpoeko htain, lamhkaree t shout lone ko pyan saw aahkyainya karl ko swarrkyaunggarar taithkuhku sai .abhaal kyount ninenganrayy tonepyan kyaungg kabyaar rayyhphoet? ngar luupuggol tait u aahpyit, saineat mar n htaung lwhar nay tae aamyin, s ngya s nyya rainnnhaeesaw mateswaymyarr nhaint aatuu nyahcar partemharhtwat trot maallhoetarar myoeshisai hphoet lone law kya rae saihu m htain kya bhuu . kyanawthoet suuapawngya thoetamhu aararmyarrko si paymaae ko kyawantawthoet htaat kyawlwan rahphoet koyya ko yya ko hpiaarrpayyhphoet shisai htainpartaal . dar kyount tait u lwalkuupartaal, t u taee tahpaatsaatahpyay ko hcate kyaaynautmhu m r int saw kyawwng, aanupanyar, htoakyang ko kyang eat kaungg tait u lamhpyiteat darhar soekyoemyarr tae wirawdhi htwat shar taat eat . sainthoetabhhoetalar m ae k bharlell? ngar re lae lhoet hkyaaw tae hkayatpyaine tarotekabyaarsarar Co- bharsarpyan sotar par . ngar myay pawtwin kyawan hkanr kyaeat suutwayko eatsarr hcain myay saat nay hpyint kyinnp myayyar nae paatsaattae, Greg Spears nae aawparartaithku libretto aalotelotetaal, hto pyi aalwan taanhpoeshisaw hpyitlar saeet aahkarabhaalaarar ko twaekyuan taat eat .